I-Akhawunti Yokuhweba ye-Forex - Ama-Akhawunti Ama-Forex Angcono Kakhulu, Vula i-Akhawunti Yangempela Manje nge-FXCC
Ku-FXCC sinikeza ububanzi be-ECN
ama-akhawunti ukuze afane nabo bonke abathengisi.
Noma ngabe yiliphi izinga lakho lokuhweba
isipiliyoni noma izidingo, siyakholelwa
VULA I-ACCN I-ACCOUNT MANJE
Ukusakazeka Okuhlukahlukene Kusuka 0.0 Pips Ayikho ikhomishini
Cha Idiphozidi encane 0.01 uLoti Usayizi 1: 500 Ubukhulu beMax Mahhala Izimali Idiphozithi yokuqala engu-100% Bonus ECN Thayipha Ukwenza EA Iyatholakala Islamic -Akhawunti Ukuqotshwa Kuvunyelwe
Ukuntanta Kusuka kuma-pips ayi-0.0
Ayikho idiphozi encane
Usayizi ophansi weLoti
Ukuvikelwa Kwebhalansi Engalungile
100% ibhonasi ngokudiphozithi kokuqala *
Imali Yesisekelo Esitholakalayo
I-USD, i-EUR, i-GBP
Yeka izinga lokuphuma
ENew York, eLondon, eJalimane, eHong Kong
Forex, Izinsimbi, Amandla, Ama-indices
Ukuhweba Kwezindaba Kuvunyelwe
Ayikho iMin. Misa Ukulahlekelwa Ibanga
* Imigomo Nemibandela Yebhonasi
Qala nge-Akhawunti Yokuhweba Ye-Demo Yokungabikho Ingozi
Noma ngabe umhwebi wakho omusha noma onolwazi, i-akhawunti yedemo engenabungozi iyindlela enhle yokuthola izinzuzo zokuhweba nge-ECN ngeFXCC. Prakthiza amakhono akho okuhweba nge-forex noma uvivinye amasu amasha ngokutshalwa kwezimali okungu-zero.
Izintengo zangempela-nesikhathi kanye nokukhishwa kwezimakethe kwangempela kwezimakethe Buka amashadi, izindaba nokuhlaziywa
Ukufinyelela ku-platform ephelele ye-Metatrader4 yokuhweba Zama ukuhweba ngezimali ze-$ 10.000 zemali
VULA i-ECN DEMO ACCOUNT
I-akhawunti yethu ye-ECN XL inezo zonke izici nezinzuzo ongayilindela futhi udinga kusuka kumthengisi we-ECN / STP oye wahlala eqinisweni ekuthuthukiseni imboni. Umdayisi oye wasiza ukuhlela ikusasa lomkhakha. Eqinisweni ku-FXCC sikholelwa ukuthi le akhawunti ye-ECN ayiyona eyisisekelo nhlobo. Yenye ye-akhawunti ehamba phambili kakhulu yokuhweba, egcwele izici nezinzuzo, okwamanje etholakalayo embonini ye-forex.
Ku-FXCC sivame ukusebenzisa isiqubulo esisamukele eminyakeni edlule; "kusuka kuma-acorn amancane kuzokhula ama-oki amakhulu". Wonke umhwebi we-ECN uqala kwenye indawo yingakho wonke amaklayenti weFXCC ephathwa njengomuntu ngamunye, i-VIP, ozojabulela insizakalo yomuntu siqu, engenakulinganiswa. Amaklayenti angavula i-akhawunti ye-ECN XL futhi ajabulele ileveli efanayo yokusekelwa okugcwele nokuzinikela njengokuthi bayiklayenti le-VIP. Uzojabulela ukusebenzisa amandla afinyelela ku-1: 500 futhi uzokwazi ukusebenzisa ngokunenzuzo imodeli ye-ECN / STP yokuhweba nge-forex esisize ukuyiphayona.